Mashiinka Alxanka Xiinka Mashiinka Loogu Tala Galay Qalabka Alxanka Ku Biirista Thermoplastic
Bogga ugu weyn / Xiinka Xiinka / 15KHz alxanka ultrasonic / Xiinka Mashiinka Alxanka Xiinka ee Alxanka Loogu Bixiyo Qaybaha Kuleylka Kuleylka
Categories: 15KHz alxanka ultrasonic, Xiinka Xiinka, alxanka Tags: iibsato walxaha caaga ah ee ultrasonic, iibso alxanka ultrasonic, alxamid balaastig sonic ah, alxanka dharka alxanka, welwelka caagga ah ee ultrasonic, alxanka caaga ah ee ultrasonic iib ah, qiimaha alxanka caaga ultrasonic, alaab-qeybiye alxanka caaga ah, alxanka caaga ultrasonic, qalabka alxanka caagga ah ee ultrasonic, Mashiinka alxarka caaga ah ee ultrasonic, nidaamka alxanka caaga ultrasonic, alxanka ultrasonic, wel wel Xiinka iibka ah, qiimaha weligiis ultrasonic, Generator alxanka ultrasonic, caaga alxanka ultrasonic
Mashiinka alxanka balaastigga Ultrasonic | alxanka heerkulka-kulul ee ultrasonic; qalabka alxanka balaastigga ah ee soniciga ah oo wata Toos isdabajoog ah
Xiinka alxanka balaastigga waa farsamo warshadeed oo gariirka aakhiyeerka ah ee loo yaqaan 'ultrasonic acoustic vibrations' oo maxalli ah lagu dabaqo meelaha shaqada lagu wada hayo iyadoo cadaadis la saarayo si loo abuuro alxamid-dowlad adag. Waxaa badanaa loo isticmaalaa balaastikada iyo biraha, iyo gaar ahaan ku biirista waxyaabaha aan la midka ahayn. In alxanka ultrasonic, ma jiraan boolal isku xidha, ciddiyaha, walxaha wax lagu dhejiyo, ama dhejiska lagama maarmaanka u ah inay isku xidhaan qalabka. Markii lagu dabaqo biraha, astaamaha xusid mudan ee habkan ayaa ah in heer kulka uu sifiican uga hooseeyo barta dhalaalka maaddooyinka ku lugta leh sidaas darteed looga hortagayo wax kasta oo guryaha aan loo baahnayn oo ka dhalan kara soo-gaadhista heerkulka sare ee walxaha.
Cha Raad-raac si isdaba joog ah otomaatig ah, oo ku habboon cabbirro kala duwan oo alxanka dhinta iyo caaryada naqshadeynta kaladuwan, tirada isugeynta ee otomatiga ah: ± 400HZ
Tusaale: 15KHZ ultrasonic, celcelis caaryada ee 14.4-15.2KHZ wuxuu awood u leeyahay raad raac isdaba joog ah
Use Isticmaalka kombiyuutarka CPU si uu ula socdo barnaamijyada kala duwan waa dhakhso oo lala qabsan karaa. Nidaamka ilaalinta ee lagu dhisay "nidaamka ilaalinta nidaamka" wuxuu ka jawaabi doonaa xaaladaha soo socda: heerkulku waa mid aad u sarreeya cadaadiskuna waa mid aad u sarreeya, taas oo horseedaysa culeys xad dhaaf ah. Waqtiga xad dhaafka ah ee koronto dhaliyaha ultrasonic, furfurida madaxa alxanka, transducer ama transducer, guuldarada matoor wareegga, iwm.
Tun Toosinta otomatiga ah waxay u saamaxdaa dhaliyaha koronto-dhaliyaha inuu si toos ah ula socdo una magdhabo isbedelada ku dhaca alwaaxyada madaxa. Marka heerkulku aad u sarreeyo, xiro dusha madaxa alxarka ama qashinka burburka madaxa, isbeddelka isdaba-joogga ah ayaa dhici doona.
Nidaam amplitude joogto ah oo si otomaatig ah loo dhisay. Iloomikada ultrasonic waa la hagaajin karaa 50% ilaa 100% stepless si loogu waafajiyo shaqada alxanka duwan.
♦ IGBT, xawaaraha jawaab celinta ayaa 100 jeer ka dhakhso badan tan tuubada xoogga silica ee caadiga ah.
Capacity 10-20 jeer / daq
Foomka Wadista Pneumatic
Dhererka Stroke (Horn Journy) 75mm 100mm
Waqtiga Wax Soo Saarka 0.01-9.99S ​​Isku-hagaajin
Alxanka Aagga Φ100 Φ200 Φ300 Φ400
Qaabka xakamaynta Xakamaynta tirooyinka
Cadaadiska hawada ee shaqada 1-7 Baar
Miisaanka 90KG 90KG 90KG 120KG
cabbir 450 * * 750 1100mm 760 * * 1000 1950mm
1. Mashiinka caaga ah ee alxanka loo yaqaan 'Ultrasonic alxanka', oo si toos ah loo hagaajiyo, si fudud loo isticmaalo loona dayactiro
2. Alxanka waqtiga, dib u dhaca waqtiga, waqtiga alxanka iyo waqtiga haynta. Cadaadiska shaqada waa la hagaajin karaa.
4. Caymis sax ah oo tayo sare leh oo dalka laga keenay
5. Transducer tayo sare leh iyo xoojin.
6. Is-ilaalin: Xilliga Joogtada ah, Joogsiga Joogtaynta, Heerkulka xad-dhaafka ah
7. Waxaa lagu heli karaa 4 mowjadood - 15 KHz, 20 KHz, 35 KHz iyo 40 KHz.
8. Beddelaad codsi dhakhso leh, xoog tollayn alxam ah.
9. Waxay ku habboon tahay kaararka sare iyo waqtiyada wareegga gaagaaban.
Xiinka Alxanka Xiinka / caaryada alxanka Xiinka:
Codsiyada alxanka ultrasonic waa ballaaran yihiin waxaana laga helaa warshado badan oo ay ka mid yihiin korontada iyo kombiyuutarka, baabuurta iyo aerospace, caafimaadka, iyo baakadaha. Hadday laba shey noqon karaan kuwo si go'an loo dhajin karo waxaa lagu go'aamiyaa dhumucdooda. Haddii ay aad u culus yihiin howshan iyaga ka mid noqon maayo. Tani waa caqabadda ugu weyn ee alxanka biraha. Si kastaba ha noqotee, fiilooyin, isku xirnaanta microcircuit, birta xaashida ah, biraha, ribbons iyo meshes ayaa badanaa lagu biiriyaa iyadoo la adeegsanayo alxanka ultrasonic. Alxanka Ultrasonic waa farsamo caan ah oo loogu talagalay isku xirnaanta thermoplastics. Waa dhakhso oo si otomaatig ah ula socotaa waqtiyada walxaha badanaa ka hooseeya hal sekan oo ma jiro nidaam hawo oo loo baahan yahay si looga saaro kuleylka ama qiiqa. Alxanka noocan ah waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu dhiso goleyaal aad u yar, aad u adag, ama aad u jilicsan farsamooyinka alxanka badan.
Warshadaha baabuurta: qaybaha jirka ee balaastigga ah, albaabada gaariga, muraayada gawaarida, laydhadhka, muraayadaha, qorax qorraxda, qaybaha gudaha, miirayaasha, sheyga milicsiga, kororka muuqaalka, dambiisha, fiilada, miiraha balaastiga ee mootada, Radiator, haanta dareeraha bareega, koobabka saliida, taangiyada biyaha, shidaalka taangiga, tuubada hawada, qalabka wax lagu nadiifiyo, saxanka saxanka, iyo wixii la mid ah.
Elektaroonigga caaga: mitirrada biyaha lagu shubay, qalabka isgaarsiinta, taleefannada gacanta, qalabka taleefanka gacanta, kiiska taleefanka gacanta, kiiska batteriga, xeedho, waalka dayactirka baytariyada aashitada, 3-inji floppy disk, U disk, SD card, CF card, USB connection, Bluetooth qalabka, iyo wixii la mid ah.
Qalabaynta: galka, albumka, sanduuqyada isku laaban, PP hollow allo, qalin loops, cartridges ink, toner cartridges, iyo wixii la mid ah.
Wax soo saarka Caafimaadka iyo Maalinlaha: saacadaha, maacuunta jikada, daboollada dhalada dareeraha ah, koofiyadaha faleebada, qalabka taleefanka gacanta, burush jilicsan oo dahab ah, iyo baahiyaha maalin kasta, qabashada, daboolida amniga, dhalada la isku qurxiyo, dheriga kafeega, makiinadaha dharka lagu nadiifiyo, qalabka birta lagu shubo, Birta korantada, aaladaha korontada, nadiifinta faakiyuumka. , ku hadla, daboolka iyo birta birta wejiga iyo injineernimada kale iyo wixii la mid ah.
Wax soo saarka caafimaadka: alaabada carruurta, joodariyaasha hawada, dharka sudhan, qalabka beeraha, qalabka nadaafadda ee jikada, qubeyska, madaxa qubeyska, iyo wixii la mid ah.
maaskaro wajiga mashiinka alxanka barta ultrasonic, weelka maaskaro la qaadi karo ee welda ah
Mashiinka Xiinka Alxanka Xiinka-Xiinka Maaskarada Mashiinka Alxanka